How many babies - 영어 - 줄루어 번역 및 예문
검색어: how many babies (영어 - 줄루어)
how many children of you
Bala ukuthi zingaki izinto ezingaphansi kwesigqoko sezimanga
Bala ukuthi zingakhi izinto ezingezansi kwesigqcoko sezimanga emva kokuba ezinye zibaleke
Chofoza idayisi ukuze uveze ukuthi mangakhi amacashaza we-ice phakathi kuka - Tux kanye nenhlanzi. Chofoza idayisi nhenkinombho yegundani esesandleni sokudla ukuze ubale kusukela emuva. Uma usuqedile, chofoza inkinobho ka- OK noma ushaye u-ngena.
Bheka umdalizimanga, uyena okutshela inani lezinkanyezi ezingaphansi kwesigqoko sakhe sezimanga. Uma uqeda, chofoza isigqoko ukuze usivule. Izinkanyezi ezimbalwa ziyabaleka. Chofoza futhi esigqokweni ukusivala. Kumele ubale ukuthi zingaki ezisesekhona ngaphansi kwesigqoko. Chofoza esikhaleni esingezansi kwesokudla ukupha impendulo.
Lenkinobho isho inani ledena (lokuqonde dindilizi) noma imihume (lokumile thwi) umqhebezi wendawo yokusebenzela ubonisa izindawo okusetshenzelwa khona. Lenkinobho ibaluleke uma inkinobho display_all_workspaces ziyiqniso.
korean name of cheryl (영어>한국어)languages spoken (영어>타갈로그어)donde haces la tarea (스페인어>영어)i will never bother you again (영어>힌디어)tham chiếu isrc (베트남어>영어)disadvantages of discipline in students life (영어>힌디어)ella es tu nina (스페인어>영어)bulu film video hindi bulu film (인도네시아어>영어)extremely depressede (영어>스페인어)x ** v ideo p**video * hd (힌디어>영어)badi ammi (힌디어>영어)semi block sulat samole (영어>타갈로그어)perhaps love (영어>타갈로그어)what do you do with your eyes (영어>힌디어)kwa maana ya jina fetiliia (스와힐리어>영어)arşivlerinde (터키어>프랑스어)so gaya tha (힌디어>영어)thank you all my friend for the birthday wishes (영어>Gujarati)may i help you (영어>힌디어)pujuk hati sendiri (말레이어>영어)karin morfema (스페인어>케추아어)paikannusjärjestelmä (핀란드어>루마니아어)vivens (라틴어>러시아어)b f xx bhojpuri (힌디어>영어)estrema mancanza (이탈리아어>영어)